၂၀၂၂ ခုနှစ် ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုပေးပွဲ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ဆု ဝီလ်စမစ်သ်နှင့် နစ်ကိုးလ်ကစ်ဒ် မင်းတို့ ရရှိ(ဓာတ်ပုံ) – DVB
၂၀၂၂ ခုနှစ် ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုပေးပွဲ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ဆု ဝီလ်စမစ်သ်နှင့် နစ်ကိုးလ်ကစ်ဒ် မင်းတို့ ရရှိ(ဓာတ်ပုံ)
၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် ရွှေကမ္ဘာလုံးဆု ရွေးချယ်ခံရတဲ့ ရုပ်ရှင်စာရင်းတွေကို ဇန်နဝါရီ ၉ ရက် က ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ဝီလ်စမစ်သ်နဲ့ နစ်ကိုးလ် ကစ်ဒ်မင်းတို့က အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ဆုတွေ ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။
လူမည်းသရုပ်ဆောင်မင်းသား ဝီလ်စမစ်သ်က မင်းသား Benedict Cumberbatch ၊ Denzel Washington တို့ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး King Richard ရုပ်ရှင်နဲ့ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင် မင်းသားဆုကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဩစတေးလျသရုပ်ဆောင်မင်းသမီး နစ်ကိုးလ်ကစ်ဒ်မင်းက တော့ Lady Gaga ၊ Kristen Stewart တို့ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး Being the Ricardos ရုပ်ရှင်နဲ့ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင် မင်းသမီးဆုကို ရရှိခဲ့တာပါ။
ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုကတော့ နာမည်ကျော် အော်စကာဆုပေးပွဲမတိုင်ခင် ကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ သက်တမ်းရင့် အနုပညာထူးချွန်ဆုပေးပွဲတခုဖြစ်ပြီး ဒီဆုရရှိသူတွေဟာ အော်စကာဆုတစ် ပြေးစာရင်းမှာ ပါဝင်လေ့ရှိတယ်လို့လည်း နာမည်ကြီးပါတယ်။
အခုနှစ်ရဲ့ ဒရာမာအမျိုးအစား အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆုကိုတော့ The Power of the Dog ရုပ်ရှင်ကားက ရရှိသွားခဲ့ပြီး ဂီတဇာတ်မြူးအမျိုးအစား အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဆုကိုတော့ West Side Story ရုပ်ရှင်က ရရှိသွားပါတယ်။
အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်မင်းသမီး (ဂီတဇာတ်မြူး)ဆုကိုတော့ West Side Story ရုပ် ရှင်နဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး Rachel Zegler က ရရှိခဲ့ပြီး tick, tick... BOOM! ရုပ်ရှင်နဲ့ နာ မည်ကြီးတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသား Andrew Garfield ကတော့ အကောင်းဆုံးသရုပ် ဆောင်မင်းသား (ဂီတဇာတ်မြူး)ဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်ဆုတွေအဖြစ် ဟောလိဝုဒ် သရုပ်ဆောင် မင်းသား Kodi Smit-McPhee က The Power of the Dog နဲ့ ရရှိသွားပြီး မင်းသမီး Ariana DeBose က West Side Story ရုပ်ရှင်ကားတွေနဲ့ အသီးသီး ဆုရရှိသွားပါတယ်။
အခုနှစ်ရဲ့ ဒရာမာအမျိုးအစား အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဆုကိုတော့ The Power of the Dog ရုပ်ရှင်နဲ့ ဒါရိုက်တာ Jane Campion က ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲန်နီမေးရှင်းအမျိုးအစား အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ကားဆုကိုတော့ နာမည်ကြီး Luca ၊ Raya and the Last Dragon ရုပ်ရှင်တွေကို ဖြတ်ကျော်ပြီး Encanto ရုပ်ရှင်က ဆုရရှိသွား ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားဘာသာစကားပြော အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဆုကိုတော့ ဂျပန်နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင် Drive My Car က ထူးထူးခြားခြား ဆွတ်ခူး ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆုရရှိသူတွေ စာရင်းအပြည့်အစုံ ကိုတော့ အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Jason Sudeikis, "Ted Lasso" *WINNER
Jean Smart, "Hacks" *WINNER
Jeremy Strong, "Succession" *WINNER
Mj Rodriguez, "Pose" *WINNER
Michael Keaton, "Dopesick" *WINNER
Kate Winslet, "Mare of Easttown" *WINNER
"The Underground Railroad" *WINNER
Sarah Snook, "Succession" *WINNER
Oh Yeong-su, "Squid Game" *WINNER
Kenneth Branagh, "Belfast" *WINNER
"No Time to Die" from "No Time to Die" - Billie Eilish, Finneas O'Connell *WINNER
Kodi Smit-McPhee, "The Power of the Dog" *WINNER
Ariana DeBose, "West Side Story" *WINNER
Andrew Garfield, "Tick, Tick ... Boom!" *WINNER
Nicole Kidman, "Being the Ricardos" *WINNER
Rachel Zegler, "West Side Story" *WINNER
Jane Campion, "The Power of the Dog" *WINNER
2022 Golden GlobesNicole KidmanWill Smith၂၀၂၂ ရွှေကမ္ဘာလုံးဆု